Maxkamad ku Taalla Kampala oo la soo Taagay Xubno Xiriir la leh Al-shabaab |
Maxkamad ku Taalla Kampala oo la soo Taagay Xubno Xiriir la leh Al-shabaab
baclofen tablets buy, order zithromax. Toban ruux oo lala xiriirinayo Shabaab ayaa maanta mar kale la horkeenay maxkamad ku taalla Magaalada Kambala ee xarunta dalka Uganda, kuwaasoo ay booliiska dalkaas ay gacanta ku dhigeen bishii September ee sannadkii hore.
Xeer-ilalaiyaha guud ee Uganda, Edward Muhumuza ayaa maxkamadda ka hor sheegay in baarayaasha la siiyo waqti dheeraad ah si ay caddeyno intan ka badan oo buuxa ula yimaa-daan, isgaoo codsaday in maxkamadeyntan 10-ka qof dib loo dhigo.
Sidoo kale, dacwad-oogayaasha maxkamadda Kampala ayaa sheegaya in tobankan ruux ay doonayeen inay Uganda ay ka fuliyaan weerarro loogu aar-gudayo hoggaamiyihii hore ee Al-shabaab, Axmed Cabdi Godane ee Mareykanku uu duqeyn ku dilay bishii September ee sannadkii 2014-kii.
Tobanka qof ee maxkamadda la hor-keenay oo sagaal ka mid ah ay Soomaaliya yihiin ayaa waxaa ku jira labo dumar ah, iyadoo qareennada u doodaya 10-ka qof ay diideen eedeynta loosoo jeediyay ee argagaxisonimada la xiriira.
Dalka Uganda ayaa waxaa Soomaaliya kaga sugan kumannaan ciidammo ah oo ka mid ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM, iyadoo hay’adaha ammaanka ee dalkaas ay adkeeyeen ammaanka tan iyo dhammaadkii sannadkii hore ee 2014-ka, markaasoo ay Al-shabaab ku goodisay inay weerarayso dalalka ay ciidamadu kaga sugan yihiiin Soomaaliya.
Al-shabaab ayaa sheegay mas’uuliyadda laba weerar oo lagu dilay 76-qof oo magaalada Kampala ka dhacay sannadkii 2010-kii, dadkaasoo intooda badan ahaa kuwo daawanayay ciyaartii kama dambeysta ahayd ee Koobkii adduunka ee sannadkaas lagu qabtay dalka Koonfur Afrika.